Global Voices teny Malagasy » Noroahan’i Serbie ny “neo-Nazi” Amerikanina iray rehefa navoakan’ny vohikala mpanadihady Bellingcat ny misy azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Febroary 2021 9:46 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bosnia Herzegovina, Etazonia, Hongria, Okraina, Serbia, Mediam-bahoaka
Soratsoratra manavakavaka any Serbie mivaky hoe “Ario anaty fako ireo mpitsoaponenana” no novain’ny vondrona mpanohitra ny fanavakavahana ho “Mandray mpitsoaponenana”. Sary  avy amin’ny Antifascist Action Novi Sad, nahazoana alàlana.
Noroahan’i Serbie i Robert Rundo, ilay “Amerikanina neo-Nazi sady mpanorina ny vondrona miandany amin'ny ankavanana Rise Above Movement,” hoy ny tatitry  ny gazety Serbe mpiseho isanandro Blic tamin’ny 11 Febroary.
Tamin’ny volana Novambra, ny vohikala mpanao fanadihadiana Bellingcat dia nampitandrina ny vahoaka  fa ao Serbie i Rundo, ary nisarika ny sain’ny mpamaky tamin’ireo horonantsary navoakan’ity farany avy any an-toerana. Izany dia ahitàna horonantsary ahitàna ity tovolahy 30 taona, teraka tao Queens, New York, mirehareha fa nanampy ireo “neo-Nazis” ao an-toerana namerina ny soratsoratra izay novain ’ireo mpiady amin’ny fanavakavahana ao an-toerana, andro vitsy mialohan’io.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ireo mpomba ny firehan-kevitry ny nasionalista elatra havanana sy ny mpandala vahoaka avy any Balkans, izay mampiroborobo ny endrika fanavakavaham-bolonkoditra mifanaraka amin'ny fahambonian'ny Amerikanina fotsy, dia niezaka namboly fifamatorana  sy fiarahamiasa tamin'ny hetsika amerikana havanana.
Saripika avy amin’ny horonantsary nivoaka tao amin’ny kaonty Telegram an’i Robert Rundo ny 8 Novambra 2020, mampiseho azy eo anoloan’ny kisarisary avy amin’ny mpiandany ankavanana any Belgrade, Serbie. Ny kisarisary dia ahitàna sary manavakava-bolonkoditra (ny sainan’ny Vokovoko Tatsimo, famantarana ny tolona ho an’ny fitazonana ny fanandevozana any Etazonia  nandritra ny adim-poko tamin’ny 1861-1864) sy fiantsiana herisetra. Sary avy amin’ny Bellingcat , nahazoana alalana.
Ny vohikala Mondo , iray amin’ireo haino amanjery ireo, dia nanambatra ny teny hoe “neo-Nazi sy “mpanambony fotsy hoditra,” ka niantso an’i Rundo hoe “Super Nazi.”
Ny fandalinana nataon’ny Bellingcat momba ilay horonantsarin’i Rundo dia nilaza fa efa hatramin’ny Martsa 2020 fara-fahakeliny izy no nonina tany Serbie, no sady nivezivezy nanerana an’i Eoropa afovoany sy atsinanana, ary nandray anjara tamina diabe tany Ukraine  sy nandray fitenenana tamina famoriam-bahoaka neo-Nazi tany Hongrie .
Nanokatra toeram-pivarotana akanjo mitondra ny anarana hoe Serbon  i Rundo any Serbie, ahitàna vokatra mampiseho sary manambony fotsy hoditra sy teny filamatra manohitra ireo mpanohitra ny fanavakahana na “anti-antifa”. Ny kaonty YouTube an’ny Serbon dia ahitàna horonantsary rap amin’ny teny serbe  izay mampirisika ny ady an-tsena. Araka ny heno dia ahafahan’i rundo mijanona any an-toerana mandritra ny fotoana voafetra ny fananganany izany orinasa izany, amin’ny maha-vahiny mpampiasa vola azy.
Rundo dia mpanao ratsy voaheloka, izay nanefa ny saziny tany amin’ny fireneny noho ny fanafihana ankizilahy 13 taona niaraka tamina andian-jiolahy, ary ny hetsika fanavakavaham-bolonkoditra ataony dia notaterin’ny Daily Beast , PBS , ary ny New York Review of Books .
Tsy mbola karohina aloha izy any Etazonia amin’izao fotoana izao. Tamin’ny 2019, navotsotry  ny mpitsara federaly i Rundo rehefa notsipahana ny fanenjehana ireo mpikambana telo anatin’ny Rise Above Movement (RAM) voahenjika noho ny fandraisany anjara tamina famoriam-bahoaka feno herisetra  nanerana an’i California tamin’ny taona 2017, satria tsy araka ny lalàmpanorenana ny lalàna federaly nampiasaina anenjehana azy ireo.
Ny volana Novambra 2020, ny Etazonia  dia nanohitra ny fitsipahan’ny fitsaràn’ny distrika ny fanenjehana an’i Rundo sy ireo olona telo hafa niray tsikombakomba taminy mba handikàna ny lalàna manohitra ny rotaka, amin’ny alalan’ireo hetsika ataony eo anivon’ny RAM (19-50189 USA v. Robert Rundo ).
Ny RAM  dia vondrona miandany amin'ny ankavanana  avy any Californie atsimo izay mampiasa ny “arts martiaux” mba hampidirana tanora vaovao  ary voafaritra ho “andian’olona mahery setra, neo-Nazis saro-tahotra sy mpanavakavaka,” izay fotsihoditra mpiaro tanindrazana, mpanambony fotsy hoditra, ary miandany amin'ny ankavanana.
Araka ny tatitra momba ny fiandaniana amin'ny ankavanana tamin’ny 2020  nataon’ny Kaomitin’i Helsinki ho an’ny Zon’Olombelona ao Serbie, dia mifantoka amin’ny fisintonana ankizy ireo neo-Nazis any Serbie, ka ny ankizilahy any amin’ny kolejy sy lisea no “miaramila” ampidiriny.
“Ireo ankizy eny amin’ny lisea matetika no voasarika. Taloha, ny fomba fidirana amin’ny firehan-kevitra manavakavaka dia ny hetsika “Nazi skinheads” na ireo vondrona “hooligan” miendrika mpankafy ireo ekipa goavana amin’ny baolina kitra. Ankehitriny dia amin’ny aterineto no hanaovana ny fampidirana mpikambana, na dia mbola mifandray amin’ireo vondrona ireo aza indraindray ny sasany amin’ireo mpanavakavaka vaovao,” araka ny fanazavàn ’ny mpandalina fiarahamonina Miloš Perović nandritra ny fanambaràna tao amin’ny Nova.rs TV.
Nanampy i Perović fa tsy olana hita ao Serbie irery ny fitomboan’ny fampidirana tanora amin’ireny fikambanana ireny, fa hetsika maneran-tany izay mampiseho paikady mazava, mifototra amin’ny asan’i Steve Bannon , mpanolotsaina an’i Donald Trump taloha.
Ny vohikalan’ny Ministeran’ny Raharaha Anatiny ao Serbie dia tsy manome vaovao momba ny fandroahana an’i Rundo hiala ao amin’ny firenena .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/26/151575/
 nampitandrina ny vahoaka: https://www.bellingcat.com/news/2020/11/18/an-american-white-supremacists-new-home-in-serbia/
 niezaka namboly fifamatorana: https://globalvoices.org/2016/11/10/nationalists-and-populists-in-serbia-and-macedonia-celebrate-trumps-victory/
 tolona ho an’ny fitazonana ny fanandevozana any Etazonia: https://www.battlefields.org/learn/articles/10-facts-what-everyone-should-know-about-civil-war
 horonantsary rap amin’ny teny serbe: https://www.youtube.com/channel/UCNL8ERGcWAkeHbp8kUhB1GA/videos
 voahenjika noho ny fandraisany anjara tamina famoriam-bahoaka feno herisetra: https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/4-members-of-violent-white-supremacist-group-face-riot-charges-federal-authorities-say/
 19-50189 USA v. Robert Rundo: https://www.ca9.uscourts.gov/media/view_video.php?pk_vid=0000018308
 vondrona miandany amin'ny ankavanana: https://www.counterextremism.com/supremacy/rise-above-movement
 mampiasa ny “arts martiaux” mba hampidirana tanora vaovao: https://www.theguardian.com/sport/2018/sep/11/far-right-fight-clubs-mma-white-nationalists
 tatitra momba ny fiandaniana amin'ny ankavanana tamin’ny 2020: https://www.helsinki.org.rs/serbian/opublikacije_t03.html
 Steve Bannon: https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon
 tsy manome vaovao momba ny fandroahana an’i Rundo hiala ao amin’ny firenena: http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/search/!ut/p/z1/pVPbcpswEP2WTsePIEXYIPdNdlwS39JAUke8MFxkTAsSFsIk_foK3Ic4dZPxlGFGSOzu2bPnCATgCQQ8OuRZpHLBo0LvaWCHd-OVfeVCtLibLKaQ2BMPTvwHBDEC30EAgoSrSu0ArZq4yJOw0Nl8AKO07BbJ6qZQdRdXi0YmbCq4YlytRcpOq7v2DEFy74yvFzNs4RvY5VRJngJ6FTtJisfIsJETGcMUYyOCODHQKEXbGDspHPXRNYtksgv3DZMvgHoNT0V3rL_738_duulR4T8eogPfp7zpKn1Q4bTG38TmIMgKER8nTHhs4QwEkm2ZZNJspD7eKVXVXwZwANu2NTMhsoKZiSgH8FzKTtQKPJ1GAr-WoeeHn5eR4oBq1s4rWstr3ZLt2f7a9S14q2kdctaCRy5kqdvyL5y95vQGAbu3M43guHPXXSOIrHMIbVKaR83MP5rtm1e6XSb-ZroK7x9nnm7kYqfR3iK0Nwg956K37IbkKyQrjfxNj8_F9n_Ob_6R67To-Y_9PiD6unW0nrXe7963qiyxdXxfjJ_blRrFQzo_tO3DTYlbMjH05teSfPoNWUnLgg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?search_query=Rundo